Sirna Hordoffii fi Gamaaggamaa
Gabatee : Sirna Hordoffii fi Gamaaggamaa
Intarpiraayiziin Dirillingii Oromiyaa rakkoowwan kanaan dura gama Deggersaa, Hordoffii fi Gamagamaa hojiitiin turani bu’uura godhachuudhaan hojimaata Deggersaa, Hordoffii fi Gamagamaa ittiin raawwatu qopheessuun hudhaawwan gama kanaan jiran hiikuuf irratti karoorfatee jira. Haaluma kanaan karoora keenya waggoottan itti aananii kana keessatti hojiin kun haala hirmaachiisaa ta’ee fi bu’aa qabeessa taheen kan gaggeeffamu ta’a. Haaluma kanaan:
Karoorri keenya karaa hojjattoonni fi hooggansi hundi itti hirmaateen erga qophaa’een booda mareewwan adda addaa taasisuudhaan yaadan akka gabbatu ni taha.,Sana booda qaamoleen dhimmi ilaalu erga mirkaneessaniin booda hojii irra akka oolu qaamoleen hundi irratti mare taasisuudhaan amananii hojiirra oolmaa isaatiif akka hojjatan ni taasifamaa.
Gabaasni raawwii mana hojii keenya ji’aa fi kurmaanaan qaama dhimmi ilaaluf kan dhiyaatu ta’a.
Gabaasni raawwii hojii ji'a ji'aan manajimentiidhaaf akkasumas ATTDhMMNO dhiyaatu erga xiinxalameen booda hanqinaalee mul'atan irratti duubdeebiin kennaman kahumsa godhachuudhaan sirreeffamni barbaachisaan taasifamaati deema.
Raawwii hojii keenya kurmaana kurmaanan akkasuma waggaatti waltajjiidhaan akka ilaalaman erga taheen booda akka mana hojiittis tahee akka qaamolee biro kan akka ATDhMMNO,KOREE DHAABBII CAFFEE DHIMMA DIINGDEE OROMIYAA tiin gamaggama taasifamu keessatti hanqinaalee mul'atan irratti kallattii kennamu fudhachuudhaan sirreeffamootni ni taasifamaa.
Miseensonni Boordii Intarpiraayizichaa akkuma barbaachisummaa isaatti raawwii hojii waggaatti si’a lama ni ilaalu jedhamee yaadamaa.Murteewwanii fi kallatiiwwan Boordiidhaan kennamanis dhaabbatichi fudhatee hojiirra ni oolchaa.
Hojiiwwan supervizinii dirree akkaataa sagantaa bahuutiin geggesuudhaan hojiiwwan hojjetamaa jiran akkasuma rakkoole qunnamanii fi furmaata battalaa dirreerratti kenname akkasumas rakkoowwa humnaa ol tahan sadarkaa waajjiraatti hiikkachuu qaban bifa gabaasatiin intarpiraayizichaaf ni dhiyaata.
Raawwiin hojii tokko-shaneen, garee raayyaa fi gumii adda durootaatiin sagantaa qabameen gamaggamamaa ni deemaa
Hojiiwwan Odiitii keessaatiin wal qabatan ilaalchisee adeemsa raawwii hojimaata intarpiraayizichaatiin geggeefaman qorachuun manajimentiif erga dhiyaateen booda iddoo sirrefamnii fi tarkaanfii fudhatamuu qabutti adda bahee itti deemamaa.
Manaajimentii mana hojichaa sagantaa idilee hojiilee ittin ilaallu torbeetti guyyaa tokko ni taha.
Hojii ji’a ji’aan harca’aan hafan cheeklistii qopheessudhaan ji’a itti aanuu keessatti akka raawwatamu ni taasifama.
Supervision of General manager and Vice General Manager
Management members meeting
Employee’s with Management members
Management members with Labour Union Committe
Task force (Supervison team)
Every two monthes
Report for Oromia public Enterprise supervising Authority
Meeting with Oromia public Enterprise supervising Authority
Meeting with” Caffe Oromia “standing committee.
Every 6 monthes
Gabasni Div. Irra gara kutaa karoora ji’aan gaafa 21-22tti sirreeffamee darbuu qabaa.
Gamaggama manajimentii dhaan xumuraa ji’aa gafa 26 ni raawwataa
Dhaabbata IDO irra AT.Dh, M. M. N. O tiif gabassni hanga 27 qaqqabuu qaba
Waltajjiiwwan Boorditii fi “3 ces” akkuma barbaachisummaa isaanititti ni gaggeeffamu.
Miiltoo / ANNEXES